စပါးစပါးခွံနှင့်ကြိတ်ခွဲစက်အတွက်စပါးထုပ်စက်ကိုအသုံးပြုသည်။, ကြိတ်ခွဲ, စစ်ဆေးခြင်း, ပြီးသွားပြီ, ဖွဲနုခွဲခြားခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်တစ်ခုလုံး.
2.Rice Hulling Machine တွင်အသားအရေကိုဖယ်ရှားရန်အတွက် blower ပန်ကာတပ်ဆင်ထားသည်,စင်ကြယ်သောဆန်ထည်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်.
ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်အချက်အလက်များဆန်စပါး huller နှင့် peeler ပေါင်းစပ်စက်
VTNL စီးရီးစပါးခွံစက်သည်နိုင်ငံတကာအဆင့်မီကြိတ်ခွဲသည့်နည်းပညာအဆင့်အတန်းကိုကျင့်သုံးသည်, ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကျော်ကြားဆုံးဆန်စက်ကြိတ်စက်များအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်. ဆန်ထည်စက်သည်ရှည်လျားသောအားသာချက်များရှိသည်, Hulling စနစ်နှင့်ကြိတ်ခွဲစနစ်ပါဝင်သည်, စပါးထည်ထည်စက်သည်ကိုယ်ထည်ကိုအပြီးသတ်နိုင်သည်, ကြိတ်ခွဲ, စစ်ဆေးခြင်း, ပြီးသွားပြီ, ဖွဲနုခွဲခြားခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်တစ်ခုလုံး, စပါး huller စက်သည်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောဖွဲ့စည်းပုံ၏အားသာချက်များရှိသည်, အဆင်ပြေသောစစ်ဆင်ရေး, သေးငယ်တဲ့အလုပ်အကိုင်areaရိယာ, အနိမ့်ပါဝါစားသုံးမှု, ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တို,မြင့်မားသောအလုပ်ထိရောက်မှု,စပါးအပြောင်းအလဲနဲ့၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချ,
စပါးထုပ်စက်သည်ပြီးပြည့်စုံသောဆန်ပြုပြင်ထုတ်လုပ်သည့်စက်ဖြစ်သည်. စပါးမျက်နှာပြင်တုန်ခါခဲ့သည်, စက်သို့သံလိုက်ခွဲခြာကိရိယာ, ရော်ဘာလိပ် husker, လှိုင်, လေမှုတ်စက်ကိုလေပေါ်မှာပ, ချိုင့်ဝှမ်းမှအဖြူရောင်အခွံကိုပစ်ခတ်သည့်စက်လည်ပတ်မှုလည်ပတ်ခြင်းအထိစဉ်ဆက်မပြတ်ပြီးမြောက်စေသည်,ချွဲနံ့, ဖွဲ, စပါးကိုရိတ်, ဆန်ကိုစပါးကျီထဲမှထုတ်ပစ်သည်.
ဆန်ဖွဲများအတွက်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းနှင့်အလိုအလျှောက်စပါး huller ကိုလျော့နည်း, တောက်ပသောအလင်း၏ကျိုးဆန်အစေ့, သမာဓိရှိသူ, တစ်ခုထက်ပို mark လုပ်ဖို့တိကျမှန်ကန်မှုကို. စပါးအသားအရေထည်စက်ကိုလည်း oats များထုတ်လုပ်ရာတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်,ဆန် hulling.it သည်မြင့်မားသောဆန်အဖြူရောင်နှင့်နိမ့်ကျသောနှုန်းကိုရရှိနိုင်သည်, စပါးထုပ်စက်ကိုဆန်စက်ကြိတ်ခွဲစက်နှင့်ဆန်စက်များတွင်အသုံးပြုသည်.
ဆန် huller စက်၏အင်္ဂါရပ်များ
2.ဒီစပါးခွံစက်မှာဆန်နည်းနည်းကျဆင်းတယ်, မြင့်မားသောဆန်ထွက်ရှိမှုအဖြူရောင်, အနိမ့်ဆန် Whitening အပူချိန်.
3.သင်၏လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရန် LN စီးရီးစပါးခွံစက်အမျိုးမျိုးကိုမော်ဒယ်များနှင့်အတူ.
ဆန်ထည်စက်၏နည်းပညာဆိုင်ရာ parameters တွေကို
စပါးထည် Huller စက်၏ဗီဒီယို
စပါးဆန် huller နှင့် peeler ပေါင်းစပ်စက်များအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ